Shiinaha Cast giraanta caagga birta si wadajir ah loo xoojiyay soo -saareyaasha sariirtaada caag iyo biibiile la taaban karo | Jeesjees
Tuur birta giraanta caagga ah si wadajir ah loo xoojiyay sariirta caag ah oo la taaban karo
Giraanta hoose/saxaarad hoose/sariirta hoose, waa qeybaha muhiimka ah inta lagu jiro soo saaridda tuubo la taaban karo/sibidh la xoojiyay. Waxaa loo adeegsadaa taageeridda/kor u qaadista qafiska xoojinta, caaryada tuubada, iyo dhammaan qoob -ka -ciyaarka inta lagu jiro soo -saaridda tuubo, ka dib marka la dhammeeyo wax -soo -saarka beebka, sariirta hoose/giraanta hoose/saxaarad -hoosaadka ayaa weli taageeri doona tuubada shubka/sibidhka ee la xoojiyay ilaa tuubada gebi ahaanba laga bogsado, ka dibna sariirta/faraantiga/saxarka ayaa dib loogu isticmaali doonaa wareegga kale ee xiga.
Giraanta hoose/sabuullada/saxaaraddu waxay ka samaysan kartaa bir bir ah, bir ductile ah, ama feer/culays/shaabadaysan.
Shirkaddayadu waa mid aad u xirfad badan oo khibrad u leh soo saarista sagxadaha caagga ah ee biibiilaha la taaban karo/giraanta hoose/saxaarad hoose. Waxaan u soo saarnay in ka badan 7000pcs oo sariirta hoose ah oo daboolaya baaxadda cabbirka laga bilaabo 300mm illaa 2100mm ee macmiilkayaga dibedda ah.
300mm ilaa 2100mm
18kgs ilaa 600kgs
Sawir ah giraanta caagga ah ee biibiilaha wadajirka ah ee la soo saaray sariirtaha
Hore: Biraha biraha ah Biyo wadaaga la xoojiyay sariirta caag ah ee la taaban karo
Xiga: Tuuri hiitarka aluminium-silikoon
Tuur Steel Biyo Joint Wadajir biibiile caaryada
Tuur Steel Rubber Ring Wadajirka biibiile caaryada sariirtaada
Feedh sariirtaada caaryada caaryada